Soudan: Inona no azo tsoahina tamin’ny fifidianana? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Avrily 2010 21:29 GMT
Nifarana tamin'ny 15 aprily lasa teo ny fifidianana tany Soudan, kanefa, na dia mifarana aza izany dia mbola resabe ny fangaraharana sy maha azo antoka azy eo amin'ireo mpanao politika sy ireo mpanara-maso iraisam-pirenena ary ireo olom-pirenena tsotra ao anatiny sy ivelan'i Soudan.
Andeha hojerena ny hevitry ny iraisam-pirenena mikasika iny fifidianana iny sy ny maha azo antoka azy. Ao amin'ny lahatsoratra nivoaka tao amin'ny Afriquejet mitondra ny lohateny hoe “Vondrona Afrikana, miandrandra filaminana mandritra ny fifidianana any Soudan ny IGAD “:
Raha jerena ny tantara politika vao haingana, fanamby maro noho ny halehiben'ny firenena, ny lafiny fandriam-pahalemana ary ny fisintonan'ny tady politika talohan'ny fifidianana, dia marika manan-tantara eo amin'ny tantaran'i Soudan iny fifidianana iny.
Ao amin'ity lahatsoratra ity, ilay mpanara-maso avy amin'ny Vondrona Afrikana Kunle Adeyemi manameloka ireo milaza fa tsy nalalaka sy tsy nanaja zo ny rafitra napetraka:
Manaiky izahay fa tsy tonga lafatra ny fifidianana. Na izany aza, tsy tokony hiandry zavatra tsara avy amin'ny olona tsy nandray anjara koa anefa. Vato fototra ho an'ny fifidianana ho avy iny fifidianana iny.
Any amin'ny faritra, toy izao no voalazan'ny lahatsoratra nivoaka tao amin'ny Sudan Tribune mitondra ny lohateny hoe “Fikambanana Afrikana sy Arabo manantena hitarika ny fifidianana any Soudan”:
Milaza ny fanambarana avy amin'ny Ligy Arabo:
“Tsy afaka milaza izahay fa manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny fifidianana natao tany Soudan, kanefa tsy manambany izay efa vita izahay, izay tena manan-danja”, hoy ny fanambaran'i Salh Halima, lehiben'ny ligy arabo any Karthoum.
Etsy an-kilany, ny fanambaran'ny Vondrona Afrikana dia milaza fa iny fifidianana iny no “zava-bita lehibe ho an'ny vahoaka soudanais”
Ny zava-nitranga tany Soudan dia tena manan-tantara sady zava-bita goavana ho an'ny vahoaka soudanais”, hoy Kunle Adeyemi, mpitondra tenin'ny mpanara-maso avy amin'ny Vondrona Afrikana any Soudan, tarihan'ny filohan'i Ghana teo aloha John Kufuor. “Raha jerena amin'ny hoe firenena tsy nahitana fifidianana nisy mpandray anjara betsaka tahaka ity tany Soudan efa taranaka iray izao… ny filazana fa nalalaka sady azo antoka, araka ny efa fantantsika dia tsy tokony hisaina ny mifanohitra amin'izany isika”, hoy izy nanampy.
“Tsy nahita hosoka izahay… hitanay fa mangarahara ny fifidianana,” Adeyemi nanamafy.
Mitantara ny hevitra samy hafa sy ny dikan'iny fifidianana mana-tantara iny ny tontolon'ny bilaogy.
Lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe Ruth Messinger: Fifidianana tsy nahomby tany Soudan: Ahoana izany? ao amin'ny bilaogy All Over the World no miombon-kevitra fa ny politikan'i Obama momba ny karaoty sy ny tsora-kazo hampiharina amin'i Soudan dia mbola mila tsora-kazo fanampiny:
Diso fanantenana tamin'ny fitondrana ny fifidianana ny fitantanan'i Obama. kanefa tsy ampy ny fanambarana tany amin'ny haino aman-jery. Ny politikan'ny karaoty sy ny tsora-kazo dia tmbiny vokatry ny ezaka nataon'i Soudan ho amin'ny fandriam-pahalemana ary mamela ireo izay te handrava sy manembatsembana izany fandriampahalemana izany hahazo tsora-kazo fanampiny. Maika isika izao hijery, raha tarafina ny fifidianana farany tany Soudan, hoe amin'ny fomba ahoana no hanatanterahan'ny Maison Blanche ny politika napetrany.
Ao amin'ny bilaogy Making Sense of Sudan, Abd al-Wahab Abdalla no mamehy fa ratsy ny fifidianana. Hoy izy manazava:
Fanodikodinam-bato, halatra sy hosoka, nisy izany. Mpifidy tsy nahazo nifidy, fisoratana anarana amin'ny ora farany sy famoriana mpifidy tamin'ny alalan'ny taratasy fanamarinam-ponenana maimaika izay mifanaraka na tsia amin'ny anarana voasoratra ao amin'ny lisim-pifidianana, azo antoka fa voamarin'ireo mpanara-maso avokoa izany rehetra izany. Zava-nisy tsy misy dikany taorian'ny fifidianana tamin'ny herinandro lasa teo tany Soudan.
Ny valim-pifidianana ratsy endrika dia efa voafaritry ny manan-katao izay nitondra ny politika tany Soudan nandritra ny 40 taona izao. Ny fikambanana politika naorina avy amin'ny famokarana dia efa nopotehina tanteraka tamin'ny fikomiana volana may ary nasolo azy dia niatrika fanakambanana hetsika politika maromaro ny soudanais izay tsy nankaiza fa niodina teo amin'ny olom-panjakana sy ny fitaovam-panjakana ary ny tombotsoany ihany. Ireo sisa tamin'ny fikomiana, ny ankavia mitondra ny hevitra hoe “Soudan Vaovao” miaraka amin'ny SPLM, sy ny ankavanana mitondra ny hevitra Fizakan-tenan'ny Silamo, naorina satria sady nilaina no naharesy lahatra, dia efa resy hatramin'ny ela teo amin'ny tontolo politika.
Hoy ihany izy manohy ny famakafakany:
Mizara roa mazava tsara ny mpifidy. Ao amin'ny sokajy A no ahitana ireo izay voatery na noho ny fitadiavana tombotsoa dia nanaraka ny filaharan'ny tsy maty manota. Hita ao anatin'izany ny mpifidy avy any ambanivohitra izay mila fitantanana tsaratsara hahazoany tombotsoa. Ao anatin'izany koa ireo mitaky fahazoan-dalana vao mahazo mivarotra. Ireo no nifidy ny NPC, ary arakaraky ny tsy hitiavana ilay mpirotsaka hofidiana no hisian'ny vintana hahalany azy, satria izay solombavam-bahoaka tsy tiana indrindra no manjary lasa tanana ankavanan'ny filoha sy ny saribakoliny.
Kayode Oladele ao amin'ny Sahara Reporters no mamakafaka ny fifidianana ary mijery ny fomba fanaovana izany fifidianana izany tany Soudan izay azon'ny firenena hafa halaina tahaka koa:
Misy zava-baovao sy tsara azon'ny firenena hafa hampiharina ny fifidianana tany Soudan. Nisy ny fanakambanana ny fifidianana olon-tokana (FPTP) sy ny solon-tena mifanaraka aminy (PR). Ao amin'ny solon-tena mifanaraka aminy no nahitana ny Lisitry ny Vehivavy sy ny Lisitry ny Antoko. Nampirisika ny ankamaroan'ny vehivavy hifidy izany.
Hamaranana azy, Maggie milaza ny fahataran'ny famoahana ny vok-pifidianana:
Ho an'ny maro any Atsimo, tsy mahagaga ny fanambarana ny vokatry ny fifidianana nataon'ny NEC (Komitin'ny fifidianana), raha jerena ireo zava-tsarotra niainana tamin'ny fanangonana ny vato sy ny fanisana azy avy any amin'iroe birao fandatsaham-bato any an-toerana – izay ny sasany tsy misy lalana. (Any amin'ireny toerana ireny dia manampy amin'ny alalan'ny helikoptera ny Firenena Mikambana). Ny famoahana ny vokatra amin'ny tabilao koa dia mananosarotra noho ny antony mitovy amin'ny teo aloha ihany izay nahasarotra ny fizotran'ny fifidianana: ny lanjan'ny vato sy ny tsy fahampian'ny vaovao avy any an-toerana.
Ankehitriny, tompon'andraikitra iray avy amin'ny Komity Ambonin'ny Fifidianana any Soudan Atsimo no nanambara tamin'ny Enough fa ny NEC dia tokony ho nanaraka ny hevitry ny vaomiera mitantana ny fifidianana noho ny zava-misy any Atsimo, izay mahalala tsara ny fahasarotana ara-pitaterana sy ny fahasarotana teknika izay nisy vokany teo amin'ny fifidianana tsany Atsimo, raha ampitahaina amin'ny any amin'ny foibe any Karthoum.